इन्टर उपाधिबाट एक कदम टाढा
१९ वैशाख, काठमाडौं । क्रोटोनलाई २-० ले पराजित गर्दै इन्टर सिरी एको उपाधि नजिक पुगेको छ । जितपछि इन्टरले दोस्रो स्थानको एसी मिलानमाथि १३ अंक अग्रता बनाएको छ । बेनेभेन्टोलाई २-० ले नै पराजित गर्दै मिलान दोस्रो स्थानमा उक्लेको हो । क्रोटोनको मैदानमा भएको खेलमा इन्टलरे दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो । ६९औं मिनेटमा […]
सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई विराट गोल्डकपको उपाधि
पंजावमाथि कठिन जित निकाल्दै विराट गोल्डकपको छैटौं संस्करणको उपाधि विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) काठमाडौंले जितेको छ ।यो जितसँगै एपीएफले यो सिजनमा दुई वटा गोल्डकपको उपाधि जितेको छ । यसअघि फागुन २८ गते सम्पन्न भएको चौथो गोलबजार गोल्डकपको उपाधि जितेको थियो । गोलबजार गोल्कडपमा फाइनलमा आयोजक टिमलाई ४–० गोलले पराजित एपीएफ च्याम्पियन भएको थियो । […]
विराटनगर । विराट गोल्डकपको छैठौं संस्करणको उपाधि विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) काठमाडौंले जितेको छ । विराटनगरस्थित सहिद मैदानमा शनिबार सम्पन्न गोल्डकपको फाइनलमा पाहुना टोली भारतको पञ्जाव पुलिसलाई १–० ले हराउँदै एपीएफले उपाधि जितेको हो । जितसँगै एपीएफले १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ र ट्रफी उचालेको छ । खेलको पहिलो हाफसम्म दबावमा राखेको एपीएफका प्रदिप लामा नायक बने । उनले खेलको ११ औं मिनेटमा गरेको निर्णायक गोल टिमलाई छैठौं संस्करणको विराट गोल्डकपको उपाधि दिलाउन सफल
३ वैशाख, काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीको टोलीले २ सय ५५ वटा नाईट्रोभेट ट्याब्लेटसहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । भे ६ प २७६० नम्बरको मोटरसाईकलमा सवार कार्कीलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट डोरियाबाट खटिएको एपीएफ टोलीले लागूऔषध सहित पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा सोही जिल्लाको उर्लावारी नगरपालिका २ बस्ने ३६ वर्षीय रमेश […]
विराटनगर । विराटनगरमा जारी छैठौं विराट गोल्डकपमा विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) काठमाडौं फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सहिद मैदानमा बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा घरेलु टिम विराटनगर ११ लाई ३–२ गोलले हराउँदै एपीएफ फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । जितसँगै एपीएफले फाइनल पुग्नका लागि संकटा ब्वाइज स्पोटिङ्ग क्बल काठमाण्डौं र भारतको पञ्जाब पुलिस क्लबको बिजेता टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । जितका लागि एपीएफका सनिश श्रेष्ठ, रवि थिङ्ग र मणि लामाले गोल गरेका थिए । खेलको सुरूवातमा दुवै टिम
रोशन श्रेष्ठ काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको भावी नेतृत्वलाई लिएर अहिलेदेखि नै चर्काे लविङ सुरु भएको छ । हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनालको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहे पनि आगामी वैशाखको तेस्रो साता दुई जना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को चार बर्से कार्यकाल सकिने भएकाले अहिलेदेखि नै लविङ सुरु भएको हो । […] The post सशस्त्रमा दुई एआईजीको म्याद थपिएला ? म्याद थप्दा र नथप्दा के हुन्छ ? appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
गोली लोडेड अवस्थामा रहेको अमेरिकन पेस्तोलसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीको टोलीले काठमाडौंको गहना पोखरी ईलाकाबाट शनिबार दिउँसो मेडईन यूएसए लेखिएको एक थान ९ मिमि पेस्तोलसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । सोको पाँच वटा गोली म्याग्जिनमा लोडेड रहेको अवस्थामा बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिका ३ शिखर अम्बोटे घर भई काठमाडौंको जडिबुटि बस्ने कोटे लामा र सोही जिल्लाको नवबुद्ध नगरपालिका ११ घर भई जडिबुटि बस्ने अनन्त तामाङ्ग छन् । पक्राउ परेका कोटे लामा २०७४ सालदेखि फरार अभियुक्त रहेको कुरा खुल्न आएको छ...
सिटीलाई ३ अंकको अग्रता, लेस्टर तेस्रो स्थानमा उक्लियो
२२ माघ, काठमाडौं । प्रिमियर लिगमा म्यानचेष्टर सिटीले शीर्ष स्थानमा ३ अंको अग्रता बनाएको छ । सिटीले बर्नलेलाई २-० ले पराजित गरेको हो । बर्नलेको मैदानमा भएको खेलमा सिटीका लागि गाब्रीएल जेसले तेस्रो र रहिम स्टर्लिङले ३८औं मिनेटमा गोल गरे । जितपछि सिटीले २१ खेलबाट ४७ अंक जोडेको छ र दोस्रो स्थानको म्यानचेष्टर युनाइटेडभन्दा अझै एक […]
मानव सेवा आश्रमका आश्रितलाई एपीएफ अस्पतालमा निःशुल्क उपचार
१८ माघ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) अस्पतालले मानव सेवा आश्रममा रहेका अशक्त, असहाय एवं अभिभावक विहीनहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । एपीएफ अस्पताल र मानव सेवा आश्रमका बीच आइतबार एक कार्यक्रमका बीच स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै आश्रमका आश्रितहरुले निःशुल्क उपचार सेवा पाउनु भएका हुन् । अस्पतालका प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ […]
काठमाडौँ / राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलअन्तर्गत आइतबार भएको खेलमा सावित्रा भण्डारीको चार गोलको मद्दतमा विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लब विजयी भएको छ । एफिएफ क्लबले विराटनगर महानगरपालिकालाई ७–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । एपिएफ क्लबको यो लगातार दोस्रो जित हो । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा एपिएफले मध्यान्तरअघि नै ४–० गोलको अग्रता... The post राष्ट्रिय महिला फुटबल : सावित्राको चार गोलको मद्दतमा एपिएफ विजयी appeared first on Purbeli News.
छाङरुका स्थानीयको स्वास्थ्य जाँच गर्न हिउँ छिचोल्दै ७ दिन लगाएर पुग्यो सशस्त्रको डाक्टर टोली